Shiinaha Sideed walxaha gacmo gashiyada ilaalinta kiimikada iyo qoraallada si faahfaahsan soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Joysun
Gacmo gashiyada difaaca kiimikada
Waa qayb lagama maarmaan u ah wax soo saarka kiimikada waxayna ilaalin kartaa caafimaadka shaqaalaha. Dad badan ayaa yaqaana galoofisyada kiimikada ilaaliya, laakiin ma oga wax ku filan. Halkan waxaa ah siddeed nooc oo ah maaddada gacmo gashi ee difaaca kiimikada, iyo sharaxaad kooban oo ku saabsan caqligooda guud ee la xiriira.
Midka koowaad: cinjirka dabiiciga ah
Guud ahaan marka la eego, cinjirka 'latex' dabiiciga ah wuxuu leeyahay difaac ka fiican xalka biyaha, sida aashitada iyo xalalka aqueous alkaline. Faa'iidooyinkeedu waa raaxo, dabacsanaan wanaagsan iyo adeegsi dabacsan.
Nooca labaad: Nitrile
Waxay leedahay astaamo difaac oo wanaagsan oo ka dhan ah saliidda, dufanka, waxsoosaarka kiimikada, saliidaha iyo dareeraha kala duwan. Si kastaba ha noqotee, bararku wuxuu ku dhici karaa dareeraha qaar, oo saameyn ku yeelanaya astaamaha jirkiisa iyo yareynta ilaalinta.
Nooca saddexaad: polyvinyl chloride (PVC)
Waxay leedahay saameyn ilaalin ah tiro badan oo ah walxaha kiimikada ee biyaha ku milmi kara, sida asiidhyada iyo alkalis, laakiin ma difaaci karto walxaha dabiiciga ah sida dareeraha, maxaa yeelay dareerayaal badan ayaa kala diri doona caagaga ku jira, taas oo aan kaliya keenaynin wasakhda, laakiin sidoo kale si weyn u yareeya shaqada xannibaadda galoofyada.
Tan afraad: Neoprene:
Waxay ugu dhowdahay mid raaxo leh sida caagga dabiiciga ah. Waxay leedahay difaac wanaagsan oo loogu talagalay alaabada iyo saliidaha kiimikada, waxay iska caabin kartaa ozone iyo rays ultraviolet, sidoo kale waxay leedahay astaamo gabow oo adag.
Shanaad: aalkolada polyvinyl:
Waxay leedahay saameyn wanaagsan oo difaac ah inta badan dareeraha dabiiciga, laakiin si fudud ayey ugu milmi kartaa biyaha, waxtarkeeduna wuu yaraan doonaa ka dib marka aad la kulanto biyaha, maaddaduna way adag tahay oo kuma habboon tahay in la farsameeyo.
Midda lixaad: butyl caag ah synthetic
Waxay leedahay saameyn wanaagsan oo difaac ah xeryahooda dabiiciga ah iyo asiidhyo adag. Way adag tahay in waxsoosaar la sameeyo oo laga shaqeeyo. Wax saameyn ah oo difaac ah kuma lahan saliidaha iyo dufanka, laakiin waxay si gaar ah u leedahay sifooyin difaac wanaagsan oo ku saabsan gaasaska.
Toddobaad: Caag fluorine ah
Polymer fluorinated, substrate wuxuu la mid yahay Teflon (polytetrafluoroethylene), iyo tamarta firfircoonida dusha sare waa yar tahay, sidaas darteed dhibco ma sii joogi doonaan dusha sare, taas oo ka hortagi karta gelitaanka kiimikada. Waxay waxtar badan u leedahay dareerayaasha ay kujiraan maadooyinka chlorine-ka iyo hydrocarbonska udgoon. Saamayn wanaagsan oo ilaalin ah.
Sideedaad: Polyetylenka Chlorosulfonated:
Waxay leedahay astaamo difaac u leh walxaha kiimikada badankood, waxay ilaalin kartaa alkalis, saliidaha, shidaalka iyo dareerayaal badan, waxayna leedahay caabbinta wanaagsan ee heerkulka sare iyo hooseeya, iska caabbinta iska caabinta, foorarsiga iska caabinta iyo wixii la mid ah.
Inta badan la isticmaalo badanaa cinjirka 'latex', butyronitrile, iyo polyvinyl chloride (PVC) oo loogu talagalay xididdada guntimaha.